SPM News: Somali 5.6.22
Guddoomiyaha Jamhuuriga Kim Reynolds ayaa ka hadlay arrinta sinnaanta jinsiga iyo qolka nasashada ee shalay ee degmada Linn. Guddoomiyaha ayaa shalay kula kulmayay magaalada Marion waalidiin si uu u dhageysto walaaca ay ka qabaan siyaasadda dugsiga ee la xiriirta ardayda beddelka jinsiga.
Guddiga dugsiga Linn Mar ayaa dhawaan ansixiyay siyaasad u oggolaanaysa ardayda bilaabaysa fasalka toddobaad inay isticmaalaan musqulaha iyo qolalka labiska ee la socda aqoonsigooda jinsiga.
Reynolds waxay leedahay waalidku "dareema inay ku xayiran yihiin," iyo in deeqaha waxbarasho ee ay dowladdu maalgeliso ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ay caawin doonto.
Associated Press waxay cusboonaysiisay xog-ururinteeda gaarka ah ee 2018 ee heerarka halista, qiimaynta xaaladda, kormeerka, iyo qorshayaasha waxqabadka degdegga ah ee biyo-xireennada gudaha Maraykanka.
Joornaalka Sioux City Journal ayaa ku waramaya in degmada Woodbury, ay jiraan 11 biyo-xireen oo leh qiimaynta khatarta ah ee "sare" taas oo macnaheedu yahay in khasaaraha nafeed ee bini'aadamku uu aad u sarreeyo haddii uu burburo biyo-xireennada.
Dabaylo baraf April oo baahsan oo daadiyay ilaa 3 fuudh oo baraf ah qaybo ka mid ah Waqooyiga Dakota kuma filna inay saamayn togan ku yeelato saadaasha qulqulka biyaha webiga Missouri.
Ciidamada Mareykanka ee Injineerada ayaa maanta sheegay in daadka birta ah ee ka soo qulqulaya webiga ka sarreeya magaalada Sioux uu ahaa 1.5 milyan acre-feet, 51% celcelis ahaan. Waxay timid ka dib wadarta guud ee Maarso oo ahayd 48% celceliska.
Abaalmarinta Cunnada Adduunka ee fadhigeedu yahay Des Moines ayaa ku dhawaaqday abaal-marinteeda 2022 maanta - saynisyahan cimilo oo NASA ah.
Cynthia Rozensweig ayaa daraasad ku samaysay saamaynta isbeddelka cimilada ee wax soo saarka cuntada. Waxay ka shaqeysaa NASA Goddard Institute for Space Studies.